Zimbabwe declares interim RTGS dollar its sole legal cu...
By Reuters• 24 June 2019
HARARE, June 24 (Reuters) - Zimbabwe declared its interim currency to be the country's sole legal tender on Monday in a bid to stem black market demand for foreign currencies.
* Zimbabwe declares RTGS dollar only allowable legal tender
* Black market demand for foreign currencies still strong
* Most goods still priced in foreign currencies (Adds banker comment, background)
Zimbabwe adopted the U.S. dollar as its official currency in 2009, when most Zimbabweans had already ditched the hyperinflation-wrecked Zimbabwe Dollar.
Last week the International Monetary Fund said the central bank should quickly allow the RTGS to float freely so that exporters could sell dollars at the interbank rate rather than surrender them to the central bank
Many Zimbabweans complain that goods and services are still priced in other currencies. While more than 80% of Zimbabweans earn RTGS dollars, goods ranging from bricks to rentals, car parts and many groceries have their prices pegged in U.S. dollars.
Inflation has climbed to a decade high 97.86%, eroding salaries and savings and causing Zimbabweans to fear a return to the hyperinflation of 2008 when the rate reached 500 billion percent. (Reporting by Nelson Banya Writing by Mfuneko Toyana; editing by John Stonestreet and Jon Boyle)
The Scientists Collective • 2 hours ago
Terence McNamee • 1 hour ago